Maxay yihiin Samsung oo ay taageerayaan fromats video?
Samsung taageertaa 3GP, FLV, wmv, MP4, AVI, MKV, Xvid, DivX iwm, wali waxaad la kulmi karaan arrimaha halka ciyaaro, kuwaas oo files ee taleefannada Samsung sida qaabab kuwaas oo ku jiri kara codecs in laga yaabaa in la jaan qaada qalabka kala duwan Samsung phone smart at times. Sidoo kale, waxaan ogahay xaqiiqda ah in Samsung ma natively taageeraan MOV qaababkan, Mpg, AVCHD, DV, Jabbuuti, ASF iyo mod iwm
Tani waa meesha Converter video ah ay timaado in aad gurmadka iyo waxaan leenahay hal kugu habboon, Wondershare Video Converter Ultimate . Bal aan fahmo waxa ay tahay iyo sida ay noqon kartaa caawimo ee aad si.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa wax ka badan kaliya kale video Converter, waa dhab ahaantii qalab liiska dhameystiran ee wax aad sameyn karto waa iyada oo sida diinta, kor loogu qaado, xaalkaa, download, abaabulo, gubi, qabashada iyo sidoo kale daawan jecel videos aad in ku dhow inay 159 qaabab.
Waa waa in ay haystaan ​​dadka isticmaala Samsung sida ay taageerto qalab ku dhowaad dambeeyay phone smart kasta ka brand sida Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S III, Galaxy Tab, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy S, Captivate, i7500, Moment, Galaxy Spica, Fascinate, Epic 4G, Mesmerize, dhexda, Mythic, Focus i917 iwm
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo video in telefoonada Samsung
Talaabada 1: Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate on your computer at hore, isticmaal bogaan sida siiyo kore in. Markaasaa waxaa u abuurtaan on your computer marka si guul leh ayaa lagu rakibay la.
Talaabada 2: From interface ugu weyn, guji badhanka Add Files. Suuqa ayaa soo socda waa inay u ogolaato in aad dooratid videos aad rabto in aad si loogu badalo. Marka aad sameeyey aad doorato, click double on videos ay u bilaabaan iyaga loo dhoofiyo.
Talaabada 3: Hadda, waxa la joogaa wakhtigii si ay u doortaan qaab wax soo saarka sida qalab Samsung. Tag qaybta Qaabka Output siiyey dhinaca gacanta midigta ee interface ugu weyn oo guji image qaabka waxaa la siiyey. Laga soo bilaabo suuqa kala socda, Device dooro> Samsung si aad u aragto liiska oo ay taageerayaan telefoonada Samsung oo dooro qalab gaar ah oo aad.
Talaabada 4: Marka, aad samaysay oo dhan tallaabooyinka kor ku xusan, guji badhanka loogu badalo ka koonaha midig ee interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan diinta video. Ka dib markii ay diinta ka ay ka badan tahay, waxaad riixi kartaa batoonka Folder Open inay tagaan meesha video ee la gediyay waa la badbaadiyey oo wareejiso telefoonka Samsung.
Sidee si ay u gudbiyaan videos ka PC / Mac in telefoonada Samsung
Waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho MobileGo Wondershare u videos ka PC / Mac wareejiyo si aad telefoon Samsung sida ay taageerto kala duwan ee qalabka telefoonka smart oo sameeya shaqada si fudud qasabno yar oo keliya.
Talaabada 1: Riix halkan si aad kala soo bixi codsiga Windows / Mac iyo rakibi waxaa. Rakibo Marka si guul leh, abuurtaan MobileGo Wondershare on your computer.
Talaabada 2: Hadda, ku xidhi qalab phone smart Samsung in kombiyuutarka, iyadoo la isticmaalayo WiFi ama cable USB ah. Codsiga waxaa ay awoodaan in ay si toos ah loo ogaado iyo muujiyaan qalab aad hal mar ku xiran waa in.
Talaabada 3: Riix badhanka / doorasho Videos ka galeeysid la siin dhinaca bidix ee shaashadda weyn. Laga soo bilaabo shaashadda soo socda, dooro 'dar' ay u helaan oo dar videos in aad rabto in aad ku wareejin ka your computer si aad Samsung phone smart. Markaas, guji "Open 'si ay u bilaabaan kala iibsiga oo ka mid ah videos soo xulay.
Samsung Recovery Password u Smart Phones iyo Laptops
> Resource > Samsung > Samsung video Converter - video in telefoonada Samsung